Wasiirka cadaalada: Sharciyada Qoxootiga ee Australia, wax badan ayaa laga baran karaa. - NorSom News
Wasiirka cadaalada: Sharciyada Qoxootiga ee Australia, wax badan ayaa laga baran karaa.
Wasiirka cadaalada Norway, Jøran Kallmyr oo dalka Australia uga qeybgalayo shirka ka hortaga maalgalinta argagaxisada, ayaa sheegay sida uu ugu qancay nidaamka qoxootiga dalka Australia. Isaga oo sheegay in wax laga baran karo.
Wasiirka oo la siinayay cashar ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan laamaha qoxootiga dalkaas, ayaa yaa sheegay in Australia ay gabi ahaanba joojisay qoxootiga dalkeeda doomaha ku imaan jiray. Taasna ay tahay mid wax laga baran karo.
Australia ayaa boqolaal mar lagu dhaleeceeyay inay qaab xun oo ka baxsan bini-aadantinimada ula dhaqanto qoxootiga. Waxeyna qoxootiga dalkeeda magangalyada weydiisto ku xirtaa xeryo kuyaal jaziirado bada dhexdeeda kuyaalo. Waxeyna u diidaa inay dalka Australia soo galaan, ilaa laga shaqeynayo codsigooda magangalyada, lagana siinayao magangalyo.
Wasiirka ayaa sheegay inuu aad ula dhacay arintaas, uuna rabo inuu ogaado qaabka ay arintaas ugu guuleysteen.
Xigasho/kilde: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) inspirert av strenge asylregler i Australia
Previous articleTrond Mohn: Wuxuu sanadkii hore bixiyay 187 milyan kr oo canshuur ah.
Next articleKiisaska Barnevern-ka – Qareen lacag la´aan ah ayaad xaq u leedahay